Baịbụl kwuru na ụmụ mmadụ ga-ebi n’ụwa ruo mgbe ebighị ebi. Ihe a o kwuru bụ ozi ọma. (Abụ Ọma 37:29) Baịbụl nwere akwụkwọ iri isii na isii. Chineke ji ihe dị ka iri ndị ikom anọ dee ha. Ọ bụ Mozis dere ise ndị mbụ (ya bụ, Jenesis ruo Diuterọnọmi). O dere ha n’ihe dị ka puku afọ atọ na narị ise gara aga. Jọn onyeozi dere nke ikpeazụ (ya bụ, Mkpughe), ọ karịakwala otu puku afọ na narị itoolu kemgbe o dere ya. Ma, uche ònye ka ndị dere Baịbụl dere? Chineke ji mmụọ nsọ ya gwa ha ihe ha dere. (2 Samuel 23:2) Ha dere uche ya, ọ bụghị nke hanwa. N’ihi ya, ọ bụ uche Jehova ka e dere na Baịbụl.—Gụọ 2 Timoti 3:16; 2 Pita 1:20, 21.
Baịbụl kwuo ihe ga-eme n’ọdịnihu, ọ na-emecha mee. Ọ bụ ya mere anyị ji mara na ọ bụ Okwu Chineke. O nweghị mmadụ ọ bụla ga-ekwu ihe ga-eme echi, ya emee otú ahụ o kwuru ya. (Jọshụa 23:14) Ọ bụ naanị Chineke onye Pụrụ Ime Ihe Niile nwere ike ịgwa ụmụ mmadụ ihe ga-eme echi.—Gụọ Aịzaya 42:9; 46:10.
Baịbụl bụ akwụkwọ pụrụ iche. E bipụtala ya n’ọtụtụ narị asụsụ, kesakwaara ndị mmadụ ọtụtụ ijeri. Ọ bụ eziokwu na o teela e dere Baịbụl, ihe o kwuru na ihe ụfọdụ sayensị kwuru bụ otu. Ihe ọzọ bụ na mmadụ iri anọ ahụ dere ya ekwughị ihe megidere ihe ibe ha kwuru. * Ihe Baịbụl kwuru gbasara ịhụnanya abụghị ihe mmadụ nkịtị ga-ekwuli. Ọ bụ naanị Chineke, onye hụrụ anyị n’anya, ga-ekwuli ụdị ihe ahụ. Baịbụl nwekwara ike ịgbanwe ndị ọjọọ, ha aghọọ ndị ezigbo mmadụ. Ọ bụ ihe a niile mere ọtụtụ nde mmadụ ji kwetasie ike na Baịbụl bụ Okwu Chineke.—Gụọ 1 Ndị Tesalonaịka 2:13.
Otu n’ime ozi ọma ndị ị ga-agụta na Baịbụl bụ na Chineke na-echere ụmụ mmadụ echiche ọma. Baịbụl gwara anyị ihe mere anyị ebighị na paradaịs ahụ Chineke tinyere nwoke mbụ na nwaanyị mbụ. O kwukwara ihe Chineke ga-eme iji hụ na e weghachiri paradaịs ahụ.—Gụọ Mkpughe 21:4, 5.
Na Baịbụl, e dekwara iwu na ndụmọdụ ndị Chineke nyere ụmụ mmadụ. Baịbụl kọkwaara anyị otú Chineke na ụmụ mmadụ si jee. Akụkọ ndị ahụ na-eme ka anyị ghọta àgwà ụfọdụ Chineke nwere. N’ihi ya, Baịbụl nwere ike inyere gị aka ịmara onye Chineke bụ. O kwuru ihe i nwere ike ime ka gị na ya bụrụ enyi.—Gụọ Abụ Ọma 19:7, 11; Jems 2:23; 4:8.
Broshọ a ga-enyere gị aka ịghọta ihe ndị e kwuru na Baịbụl. Ọ ga-agwa gị amaokwu Baịbụl ndị kọwara ihe a na-ekwu. Ị gụọ ha, ‘ị ga-aghọta ihe Akwụkwọ Nsọ na-ekwu.’ Ị manụ na ọ bụ otú ahụ ka Jizọs si kụziere ndị mmadụ ihe mgbe ọ bịara n’ụwa.—Gụọ Luk 24:27, 45.
Ozi ọma si n’aka Chineke enweghị atụ. Ma, ọ bụghị mmadụ niile ka ọ na-amasị. O nwedịrị ndị ọ na-ewe ezigbo iwe. Ma, ekwela ka nke ahụ kụda gị mmụọ. Ihe ga-eme ka i nweta ndụ ebighị ebi bụ ịmara onye Chineke bụ.—Gụọ Jọn 17:3.
^ para. 3 Gụọ broshọ bụ́ Akwụkwọ Dịịrị Mmadụ Nile.